Naadiyada MHS & Kobcinta | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
In ka badan 100 dariiqo oo lagu xiro, loogu adeego loona koro.
Naadiyada iyo waxqabadyadu had iyo jeer waxay qayb muhiim ah ka ahaayeen dhaqankeenna MHS. Ka mid ahaanshaha naadi ama koox waxay kobcisaa kalsooni, isku xirnaan iyo dareen bulsho oo muhiim u ah guusha ardayga. Naadiyadayada iyo Kobcinteenu waxay ardayda siiyaan fursad ay kula xiriiraan asxaabtooda danaha la midka ah ka leh heerka badbaadada, koox yar. Laga soo bilaabo naadiyada ciyaaraha ilaa taageerida arrin, waxaad hubtaa inaad heshay meel aad ka tirsanaato. Haddii aadan arkin naadi xiisahaaga xiisaynaya, mid bilow! Eeg guluubka nalka bilig-dhalaalka ee hoos ku yaal si aad u hesho tilmaamo ku saabsan sida loo bilaabo adigu.
Si aad u aragto liistadayada naadiyada oo dhammaystiran oo ay ku jiraan lataliyayaal, HALKAN RIIX .
XUSUUS: Kaliya naadiyada u baahan lacag si ay ugu biiraan waxay u baahan yihiin in laga diiwaan geliyo https://1976a.cf.wordwareinc.com . Dhamaan dadka kale, marka laga reebo Rec Sports, waa la diiwaangelin karaa iyadoo lala xiriirayo Lataliyaha ama Lataliyaha Ardayga ee ku qoran dukumiintiga macluumaadka naadiga lala xiriirinayo.
Fiiri Carwadeena Waxqabadka Waxqabadka
Bandhigyadeena waxqabadkeena waxaa la heli karaa sanadka oo dhan! Kaliya dhagsii xiriiriyaha hoose si aad u daawato fiidiyowyo macluumaad ah oo ku saabsan inbadan oo ka mid ah naadiyadayada firfircoon iyo kobcinta.
Halkan guji si aad waxqabadyo u hesho macluumaad cadaalad ah
COVID-19 Xayiraadaha & Shuruudaha Hawlaha Dugsiga Sare
Xaddidaadda iyo shuruudaha waxay ku kala duwan yihiin nashaadaadka, tirada kooxda iyo xarunta. Xeerarka COVID-19 ee waxqabadkaaga waxaa si toos ah lagaala socodsiin doonaa tababarahaaga iyo / ama lataliyahaaga. Haddii aadan helin ogeysiis kahor tababarkaaga koowaad ama kulanka naadiga, fadlan laxiriir tababarahaaga, lataliyahaaga ama xafiiska Waxqabadyada MHS.
Waxqabadyada MHS Qorshaha Diyaargarowga-19
Iyadoo la raacayo siyaasadaha ay abuureen MSHSL iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay qaadeen tallaabooyin lagu hubinayo nabadgelyada ardaydeena iyo macallimiintaba iyadoo lagu guda jiro naadiyada manhajka ka baxsan iyo howlaha kobcinta. Waa lagama maarmaan in kaqeybgalayaasha oo dhami ay ku dhaqmaan kala fogaansho nabdoon oo ay xirtaan indho shareer inta lagu jiro dhammaan kulamada iyo dhacdooyinka. Lataliyahaaga naadiga ayaa kula wadaagi doona macluumaad dheeraad ah oo gaar ah kooxdaada kahor kulankaaga ugu horeeya. Taxaddarrada amniga waa in sidoo kale lagu dhejiyaa dukumiintiga macluumaadka koox kasta.
E-Sports ( Cusub! MSHSL)
Weelka Aqoonta *
Bulshada Maamuusta Fanka Qaranka
Kediska Weelka *
Kooxda Hadalka *
Naadiga Qorayaasha (Majaladda Suugaanta ee Muuse)
Buugga Sannadka (Waxaa loo bixiyaa fasal ahaan)
BIPOC gudaha STEM
Naadiga Bayoolaji Goobta
Kooxda MMT / SMART
Kooxda Xisaabta *
Naadiga Baadhista Caafimaadka
Kooxda Hal-abuurka Ardayda
Naadiga Adeegga Tech-Savvy
Haweenka ku jira STEM
Fannaaniinta Rugta *
Fannaaniinta Donna Vocé *
Varsity Madrigals *
Musical Fall *
Ciyaar Jiilaal *
Musical Guga *
Jazz Ensemble (jiilaal) *
Kooxda Maaraynta &
Ilaalinta Midabka (dayrta) *
Orchestra Godka Muusikada
Qoob ka ciyaarka (Fall) *
Naadiga Ciyaaraha Raadiyaha - Cusub!
Kooxda Pep Pep
Isxilqaan (Tonka Farxad) -
dhinac & tartanka
Isboortiga Lakers La Qabsaday*
kubada cagta (dhicitaan)
xeegada dabaqa (jiilaalka)
Bowling / softball (gu'ga)
Naadiga Khadka Tooska ah
Farxiyayaal La-qabadsiinta Dab-demiska
Ninkii toogashada dabinka
Cayaaraha Ciyaaraha : **
(Sanduuqa diiwaangelinta Magenta)
Naadiga Tartanka Falaarta
Naadiga Rolling Club
Kooxda Baaskiil Baaskiil
Naadiga 'Ski & Snowboard Club'
Naadiga Frisbee Ultimate
Midowga Ardayda Aasiya
Ururka Ardayda Katooliga
Dhallinyarada Aasiya ee qaaliga ah
Midowga Ardayda DESI
FCA (Wehelnimada Ciyaartoyda Christian)
GSA (Isbahaysiga Jinsiga ee Jinsiga)
Udoodida Daryeelka Caafimaadka
Xuquuqda Aadanaha & Xiriirka
Midowga Ardayda Yuhuudda
Ururka ardayda muslimiinta
Naadiga Adeegga Tech-Savvy Cusub!
Naadiga Gargaarka Bariga Yurub
Sahamiyayaal (Booliska Mtka)
Nat'l ASL Bulshada Maamuusta
Naadiga Laanqayrta Cas
Naadiga Adeegga Bal qiyaas
Tonka Cares Team Team
Tonka wuxuu u adeegayaa guddiga hagidda
YDC (Golaha Horumarinta Dhallinyarada)
Naadiga Animé (Otaskus)
Naadiga Harry Potter
Naadiga Dance-ga K-Pop
Naadiga Dharka ee Joogtada ah
Naadiga Wax Soo Saarka Video
Liiskan waxyaabaha la bixiyo waa la beddeli karaa. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir Xafiiska Waxqabadka ee 952-401-5904.
* Diiwaangelinta khadka tooska ah ee loogu baahan yahay barnaamijyadan iyo kaqeybgalka iyo / ama khidmadda waxqabadka ayaa sidoo kale la adeegsan karaa. Isdiiwaangeli https://1976a.cf.wordwareinc.com/
** Waxqabadyadan waxaa lagu bixiyaa Minnetonka Community Ed. Isdiiwaangal https://www.minnetonkaschools.org/district/mcec
naadiyada / waxqabadyada
rec diiwaangelinta isboortiga
LIISKA OO DHAMMAY
Ma haysaa fikrad naadi aan liis garayn? Mid bilow!
Go'aami magaca iyo ujeeddada / himilada kooxdaada. Go'aanso noocee ah (kobcin, jirid, wehelnimo / taageero, iwm.) Kooxdaadu sida ugu fiican ugu habboon tahay.
Raadi macallin diyaar u ah inuu lataliye u noqdo kooxdaada. La-taliyayaashu waxay u baahan yihiin inay goobjoog ka ahaadaan dhammaan kulamada iyo dibedda la xiriirta kooxdaada. Hubso in Lataliyahaagu ka warqabo siyaasaddan.
Qorshee jadwalkaaga, oo ay ka mid yihiin:
Sida aad u kulmi doonto (dalwaddii, qof ahaan ama isku dhexjiraan)
Joogtaynta (bille, bil-bille, toddobaadle, iwm.)
Maalinta, waqtiga, goobta (Hadday macquul tahay, hel magaca GoogleMeet iyo koodhka Schoology)
Buuxi Codsiga khadka tooska ah ee Naadiyada Ardayda (ama nuqul ka sameyso oo ku dhaji https://goo.gl/forms/ZbznNuASKtYgn1vf1 ee shabakaddaada internetka)
Marka foomkaaga la gudbiyo, la xiriir Ted Schultz ted.schultz@minnetonkaschools.org si aad u samaysato kulan.
Markii laguu oggolaado, adiga iyo la-taliyahaaga waxaa la weydiin doonaa inaad ku dhammaystirtaan dukumintiga sharraxaadda naadiga ee Google Docs. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona inaad xafido dukumintigaaga sanad dugsiyeedka iyo bilowga sanad dugsiyeed kasta oo cusub.
Laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2020-21, Naadiyada & Kooxaha kobcinta waxay leeyihiin fursad ay ku soo saaraan fiidyowga Carwadeena Waxqabadka Waxqabadka. Fiidiyowyadu waa inay qabtaan nuxurka naadigaaga oo dhererkiisuna ahaado 1-2 daqiiqo.